Sheekadan soosocota waxa layidhahda magaceda (WAYNA DHICI KARIN) – dhugasho
haddisabdi Oktoobar 30, 2017 sheekooyin, Story
Shekadan soosocota waxa layidhahda magaceda
(WAANAY DHICI KARIN)
Nin xajiyoo sucudiga ka shaqaysan jiraray baa wuxuu qabay xaas uu aad uu jecelyahay waxayna daganayd magalada hargaysa.
fasax walba wuxuu iman jiray magalada xajigi wuxuu guursaday gabadh kale oo uu u guursaday si qarsoodiya. Marku yimadaba wuxuu kusoo dagaa min waynta. Marku mudo joogo ayuu yidhahdaa waan caana donanayaa ama waan dhofaya markasu xaska yar u tagaa.
Wuxuu sidaa uu qababa waxay u dhashay 2 laba caruura sidii cadada ahayd sucudigu diyaarad kasoo racay markay hargaysa istidhi fadhiso diyaradii bay cilad ku timi bayloodki diyaradaa soo hadlay oo yidhi diyaradda ciladbaa ku timi taayirradii baa soo bixi waayay markaa beerkaan ku fadhiisinayaa cid ka badbaadi allaa yaqanee sii dardaarma.
Dadkii baa wada dardaarmay ninkii odayga ahaaba isna dardaarmay intasoo caruuraan leyahay hanti badan baa halkaa iitaal xaas aan qabo oo an la ogayn baa jirta waa hebla hebel hebel laba caruurayna ii haysaa.
Odayga saw niman la xididaaba saaran diyaaradda wax yar ka dib ba hadana bayloodkii hadlay oo yidhi alxamdulillaah ciladdi way hagaagtay si caadiyana waynu u fadhisanaynaa. Dadkiiba wada farxay odaygibaa ka dhaxbooday oo yidhi(WAANAY DHACAYN DEE) ma markaanu wax walba sheegnay baad ledahay way hagaagtay war bahasha beerka ku fadhiisi ha laka hadheee!!!!!
WAA QALINKII IBRAAHIN XAMARI
Sheekadii guursatayee maxaad… Q19